2010 2011 Ultimate Software Guide for Windows Users - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Originally Posted by ဖက်တီး
ကျွန်တော် အရင်နေရာမှာပဲ nero 10 အတွက် Mediafire links အသစ် ထပ်ဖြည့်ပေးထားပါတယ်။
ပို့စ်နံပါတ် ၂၉ နှင့် ၃၀ က ကိုဖက်တီးနှင့် ကိုနှင်းမောင်
ကျနော် ကိုဖက်တီးအတွက် နေရာနှစ်ခုမှာ ပြန်လည် Upload တင်ပေးထားပါတယ်..
ကိုနှင်းမောင် Windows.XP.Sp3.NASA.2nd.Generation.2010 အတွက် Generation အသစ်ကိုယ်လိုချင်ရင်
ဆိုရင် အဆင်ပြေပါတယ်...ကျန်တဲ့အကိုမေးထားဒါတွေကတော့ အစ်ကိုကြီး ကျော်ဇင်သန့်လာမှဖြေပေးလိမ့်
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ kyaukphyu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဝင်းကျော်ဦး, သန့်ဇင်ဌေး, နှင်းမောင်, AZM, KznT, minthumon, tu tu, yawnathan
24-07-2010, 02:42 AM
virtual drive format file ဆိုတာ ကျနော် နားလည်သလို ပြောလိုက်တာပါ။ virtual drive ထဲထည့်ပြီး သုံးလို့ရအောင် ကျနော် သူငယ်ချင်းတယောက်ဆီက Myanmar Encyclopedia CD ရထားပါတယ်။ ပုံစံလေးက တြိဂံစီဒီပုံလေး ဖြစ်ပြီးတော့။ VCD file လို့ပြပါတယ်။ အဲဒါလေးကို ကျနော် အလွယ် virtual drive format လို့ပြောလိုက်တာပါ။ ခွေနဲ့ မသုံးဘဲ ဆော့ဝယ်စီဒီအချို့ကို virtual drive ထဲထဲ့ သုံးချင်ပါတယ်။ အဲလိုသုံးလို့ရအောင် ဘယ်လိုရမယ်ဆိုတာကို သိချင်တာပါ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုနှင်းမောင် - ဘာမေးချင်တယ် ဆိုတာ ကျွန်တော် သဘောပေါက်ပါပြီ။ မေးခွန်းမေးတဲ့ သူကို မေးခွန်းပြန်မေးတာကိုတော့ စိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာ - ဝိုးတစ်ဝါးနဲ့ စိတ်ထဲထင်တာ ဖြေလိုက်ရင်ကျ ကိုနှင်းမောင် အတွက်လည်း အကျိုးမရှိ - ကျွန်တော့်အတွက်လည်း အချိန်ပေးရပြီး တန်ဖိုးမရှိလို့ပါ။ ကိုနှင်းမောင် နားလည်လွယ်အောင် ကျွန်တော် အကြမ်းဖျဉ်းပြောရရင် virtual drive format file ဆိုတာမျိုးရယ်တော့ မရှိဘူး ကိုနှင်းမောင်ရ - အဲ့တာကိုပဲ ပိုနားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင် ကျွန်တော် အရင်ဆုံး ပြန်ပြောရမှာ Virtual CD / DVD Drive ဆိုတာတွေ အကြောင်း နဲနဲ အစပြန်ခေါ်မှ ရမယ် ထင်တယ်။ Virtual CD / DVD Drive ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ operating system မှာ တကယ် DVD / CD drives တွေတပ်ဆင်ထားတာမျိုး မဟုတ်ပဲနဲ့ ကိုယ့် OS ထဲမှာ တကယ့် DVD / CD drives တွေ တပ်ဆင်ထားသယောင် မြင်တွေ့နေရပြီး အဲ့ကနေ တစ်ဆင့်လည်း DVD / CD images ( ISO images ) တွေကို တိုက်ရိုက် Mount လုပ်ပြီး သုံးနိုင်တာမျိုးကို ခေါ်တာပါ။ ထူးခြားသွားချက်ကတော့ DVD / CD images ( ISO images ) တွေကို အသုံးချနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ သီးသန့် အခွေရိုက်ထုတ်နေစရာ မလိုတော့ဘူး - CD / DVD ROM တွေ စက်မှာ ရှိမနေလည်း ဒီ အခွေထဲမှာ ရှိတဲ့ အကြောင်းအရာ မှန်သမျှကို ကျွန်တော်တို့ Virtual CD / DVD Drive ကနေတစ်ဆင့် ဇာတ်ကားဆို ကြည့်ရှုလို့ ရတယ် - သီချင်းတွေဆို ခံစားလို့ ရတယ် - နည်းပညာရပ်တွေဆို လေ့လာလို့ ရတယ် - Software တွေဆို တိုက်ရိုက် install လုပ်ပြီး စမ်းသပ်လို့ ရမယ် - စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ကိုနှင်းမောင်လည်း သိသင့်သလောက် သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။
ဒါကိုပြန်ပြောရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက Virtual drive format file ရယ်လို့ သီးခြား ကွဲထွက်မသွားဘူး ဆိုတာ သိစေချင်လို့ပါ။ များသောအားဖြင့် Virtual drive နဲ့ Mount လုပ်ပြီး သုံးဖို့ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အများဆုံး အသုံးပြုကြတာ ISO images တွေပါ။ Virtual drive ကနေ Mount လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ တစ်ခြား Images အမျိုးအစားတွေလည်း ရှိပါသေးတယ် - ဥပမာ ပြောရရင် ISO, BIN, IMA/IMG, CIF, NRG, IMG/CCD, MDF/MDS, VCD, C2D, VDI, BWI/BWT, TAO/DAO, PDI, P01/MD1/XA, VaporCD, နဲ့ compressed Universal Image Files လို့ ခေါ်တဲ့ (UIF) format တွေပါ။ ဒါပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဂိမ်းခွေတွေကစ - Windows ခွေတွေ အလယ် - Software ခွေတွေ အဆုံး ISO ကိုပဲ သုံးလာကြတာ များပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ?? ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ISO images က Create လုပ်ဖို့လွယ်တယ်။ ISO images လုပ်ဖို့ ထုတ်ထားတဲ့ Software တွေဆိုတာလည်း တော်တော်များများရှိပြီး ထုတ်ထားသမျှ Software တွေ အားလုံးနီးပါးကလည်း free ပေးထားကြတာများပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ISO images က ခုနောက်ပိုင်းမှာ ပိုပြီးတွင်ကျယ်လာတာပါ။ ISO images ဆိုတာ ကွန်ပြူတာ စကားလုံးအရသာ စာလုံးက နည်းနည်းဆန်းနေတာပါ - သူ့ကို အလွယ်ပြောရမယ် ဆိုရင် CD / DVD ခွေတွေ အဖြစ်နဲ့ မသိမ်းချင်လို့ စက်ထဲမှာ images အနေနဲ့ အလွယ်သိမ်းထားတဲ့ သဘောပါပဲ။ စက်ထဲမှာ သိမ်းတာများဗျာ - ဒီအတိုင်း folder တစ်ခုထဲ ထည့်ပြီး Archiver တစ်ခုနဲ့ ချုံ့ပြီး သိမ်းထားလိုက်လည်း ဖြစ်တာပဲလို့တော့ အထွန့်တက်စရာ ရှိပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ အဲလို သိမ်းလို့လည်း ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ISO images format နဲ့ ဘာလို့ ပြောင်းသိမ်းကြလဲ ဆိုတော့ files ပေါင်းများစွာကို format တစ်ခုတည်း အနေနဲ့ ပေါင်းပြီး သိမ်းထားလို့ ရတာရယ် - လိုမယ်ဆိုရင် CD/DVD အဖြစ်ပါ တစ်ခါတည်း ရိုက်ထုတ်လို့ ရတာရယ် - လိုလို့ အသုံးချချင်တယ် ဆိုရင်လည်း Virtual drive နဲ့ Mount လုပ်ပြီး တိုက်ရိုက် အသုံးပြုလို့ ရတာရယ် စတဲ့ ထူးခြားချက်လေးတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကိုနှင်းမောင် မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကို ဦးတည်ချက်ထားပြီး အနှစ်ပြန်ချုပ်ရရင် Software စီဒီအချို့ကို CD/DVD မရိုက်ပဲ images ကနေတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် Virtual Drive ကနေ အသုံးချချင်တဲ့ အခါ ကျွန်တော်တို့ အရင်ဆုံး လုပ်ဆောင်ရမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Files တွေ - Software တွေ စတာတွေကို Images file အနေနဲ့ တစ်ခုတည်း ဖြစ်အောင် ဖန်တီးဖို့ပါ။ ဘယ် Images အမျိုးအစားတွေ ရှိတယ်ဆိုတာတော့ ကျွန်တော် အပေါ်မှာလည်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး ပါပြီ။ ဥပမာပေးရရင် ကျွန်တော်တို့မှာ Software တွေစုထားတာ ရှိတယ် သူတို့တွေ အားလုံးကို ပေါင်းပြီး ISO images လုပ်ကြမယ် ဆိုကြပါစို့ - ISO images အဖြစ်ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ burner ပေါင်းမြောက်များစွာ ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က အသုံးပြုကြတဲ့ Software ချင်း မတူလို့ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ အကုန်လိုက် ဖော်ပြမပေးနိုင်တာကိုတော့ နားလည်ပေးပါ ကိုနှင်းမောင် - ကျွန်တော်သုံးဖြစ်နေတာတော့ လတ်တလောမှာ MagicISO ပါ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သုံးဖို့လည်း လွယ်တာက တစ်ကြောင်း - နောက်ပြီး စစသုံးသုံးချင်မှာ နားမလည်တာတွေကို MagicISO Online Help ကနေ သရုပ်ပြပုံတွေနဲ့ အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်လို့ ခဏချင်းမှာ Software အသုံးပြုပုံကို ရင်းနှီးနိုင်တာကြောင့် ကျွန်တော် ခုထိ MagicISO ကို သုံးဖြစ်နေတာလည်း ပါပါတယ်။ MagicISO Software ကို ကျွန်တော် တင်ပေးထားတဲ့ 2010 2011 Ultimate Software Guide for Windows Users မှာရော ဒါမှမဟုတ် ဖိုရမ်က Burning Tools များအတွက် မာတိကာ မှာပါ ကိုနှင်းမောင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ကျွန်တော် သဘောကျတာကတော့ Ashampoo ပါ။ သူကလည်း တော်တော်လေး သုံးရလွယ်ပြီး CD/DVD နဲနဲ ရိုက်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိသူဆိုရင် Ashampoo ကို တစ်ခါမှ မသုံးဖူးရင်တောင် ခဏချင်းနဲ့ အလွယ်တကူ သုံးတတ်စေပါတယ်။ MagicISO သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ISO images ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမယ် - Bootable ISO image ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာ အားလုံးကို MagicISO Online Help မှာပဲ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ပြောခိုင်းလည်း အဲ့ကနေပဲ ကော်ပီကူးပြီး ပြန်ဖော်ပြရမှာမို့ Link ကိုပဲ ညွှန်ပြပေးလိုက်တာပါ။ ဒီလောက်ဆို iso file ဖြစ်အောင်၊ virtual drive နဲ့ အသုံးပြုနိုင်အောင်၊ Bootable ISO image ဖြစ်အောင် ဘာတွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်မယ် ဆိုတာ ကိုနှင်းမောင် အကြမ်းအားဖြင့် သဘောပေါက်နိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီး အသေးစိတ်လေ့လာမှုကိုတော့ ကိုယ်သုံးမယ့် burner ကို လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲ လေ့လာမှု လုပ်သွားဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
နောက်တခုကတော့ ၀င်းဒိုးခွေပါ။ ၂၀၁၀ ၀င်းဒိုး အိပ်စ်ပီလို့ အလွယ်ပြောပေမယ့် အပြည့်စုံကတော့ Windows.XP.Sp3.NASA.2nd.Generation.2010 ဖြစ်ပါတယ်။ အစ်ကို တင်ပေးထားတာလို့ ထင်ပါတယ်။
Windows.XP.Sp3.NASA.2nd.Generation.2010 က ကျွန်တော် တင်ပေးထားတာ မဟုတ်ပါခင်ဗျာ - လိုက်ရှာကြည့်တာတော့ ကိုမုန်းရခက် တင်ပေးထားတဲ့ Window XP SP3 NASA II 2010 တော့ တွေ့မိပါတယ်။ ကိုကျောက်ဖြူကလည်း အပေါ်မှာ ကိုနှင်းမောင် အတွက် Windows.XP.Sp3.NASA.2nd.Generation.2010 အတွက် Generation အသစ် ကို လိုချင်ရင် တင်ပေးမယ် ပြောထားတော့ သူ့ကိုသာ အားနာနာနဲ့ အပူကပ်လိုက်ပါဗျာ Latest လေး ရတာပေါ့
စာပြန်နောက်ကျတာတော့ ဘယ်လိုမှ စိတ်ထဲ မရှိပါနဲ့ဗျာ - ကျွန်တော်လည်း တစ်ခြား ပြဿနာလေးတွေ လိုက်ရှင်းနေရတာရယ် - အလုပ်လေးလည်း တစ်ဖက် ရှိနေလို့ပါ။
အဆင်ပြေပါစေ ကိုနှင်းမောင် -
Last edited by KznT; 24-07-2010 at 05:54 AM..
$ညိုမင်းလွင်$, ဂတုံးလေး, ညီခဝေ, ဝင်းအောင်, ဇော်ရဲပိုင်, နှင်းမောင်, bonge, hellboy, Ko-Naing, kyaukphyu, minthumon, naingagsoe, sawjonnie, tu tu, wunna313, Ye Aung
အစ်ကိုတင်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း အထက်ထက် အလွန်ပေါ့ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စောင့်နေပါ့မယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ နှင်းမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ညီ ဒီနေရာကနေပဲ ကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်ပါတယ်...ပိုစ်တိုင်းကို ညီ မ quote တော့ဝူးနော် ဒာကို... quote ရမယ်ဆိုရင် ဒာကို့ ပိုစ်တိုင်းပါပဲ..တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...ပိုစ်တိုင်းကိုစေတနာပါပါနဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည်ကို ရှင်းပြပေးတာ...ဒာကို့လို စေတနာရှင်ကတော့ ရှားပါတယ်...ညီလည်း မြန်မာ ဖိုရမ် ၊ ဒာင်္ဂလိပ် ဖိုရမ် ၊ ကုလားဖိုရမ် တော်တော်များများ ၀င်ဖူးပါတယ်....ဒဲာဒိ နေရာတွေမှာ ဒာကို့ထက် ပိုနားလည် ၊ ပိုသိတဲ့ သူရှိရင် ရှိပါလိမ့်မယ်...ဒါပေသိ ဒာကို့လို စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ရှင်းပြပေးတဲ့ သူကိုတော့ ညီမတွေ့ဖူးသေးပါဘူး....
တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်....ကို KznT တစ်ယောက် ဒာစစဒာရာရာ ဒာစဉ်ပြေပါစေနော်...ဒာကို့ မေးလ်လေးလည်း ညီဒာပ်ထားပါတယ်...accept မပေးသေးဘူးနော် ဒာကို...ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဒာပြင်မှာပါ...ခင်ချင်ပါတယ် ဒာကို..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ဂတုံးလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဝင်းအောင်, bonge, KznT, minthumon, tu tu, yawnathan
office 2010 က install လုပ်လို့တော့ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ activated မဖြစ်ဘူး activation require လိုပါတယ်
Originally Posted by orange.lay405
တကယ်လို့ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် Activated မဖြစ်ဘူး ဆိုရင် ဒီနေရာက mini-KMS_Activator_v1.1_Office.2010.VL.ENG.exe နဲ့ စမ်းကြည့်ပါ။ Antivirus ကို Download ချကတည်းက Exit လုပ်ထားဖို့ ဒါမှမဟုတ် Protection ကို Disable ပေးထားဖို့ အကြံပေးပါရစေ။ Activate လုပ်ဆောင်နည်းပါ တစ်ခါတည်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
အဆင်မပြေရင် Reply လုပ်ပေးပါ။ နောက်တစ်နည်း စဉ်းစားကြည့်ပါ့မယ်။
25-07-2010, 05:33 PM
Originally Posted by ဂတုံးလေး
တကူးတက ကျေးဇူးတင်စကားပြောသွားတာ ကျေးဇူးပါဗျာ - ကျွန်တော့် acc ကို Add ထားတဲ့ acc အားလုံး ကျွန်တော် accept ပေးထားပါတယ်။ ချက်ချင်း accept မပေးတာမျိုး ဖြစ်ရင် ကျွန်တော် မဝင်ဖြစ်သေးလို့ ပါ။ ကိုယ့်ကို ခင်လို့ မင်လို့ Add လာတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို No ပေးရလောက်အောင် ကျွန်တော့်လက်က အားမရှိသေးပါဘူး အဲတာကိုတော့ ယုံပါ။
ရဘူး download ကိုမရတာ ဒီပြင်ဆိုဒ်ကနေ ပြန်တင်ပေးပါလားဟင် ifile က မရဘူး
mini-KMS_Activator_v1.1_Office.2010.VL.ENG.rar (2 MB)
နှစ်သက်ရာ link တစ်ခုတည်းကိုသာ Download လုပ်ရန် -
ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, နိုးတူး, AZM, minthumon
there is no local KMS server found on your computer.
press 1 to install KMS emulator as windows Service.
press2to run KMS emulator once.
which no. i choose?
25-07-2010, 08:06 PM
sure thing - hit exactly "2" from ur keyboard.
And then step forward and press any key to exit.
Last edited by KznT; 25-07-2010 at 08:12 PM..
နိုးတူး, kyaukphyu, minthumon
ဟေး............. ရသွားပြီကွ။ ကိုကျော်ဇင်သန့်ကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ရှင်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ orange.lay405 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
14-08-2010, 07:38 PM
9. Microsoft Office 2010 Professional Plus x64 and x86 14.0.4743.1000 Full Activated ကသုံးနေရင်းနဲ့
အခု Activated မဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်နေလို့ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ညွန်ကြားပေးစေချင်ပါတယ်။ မသုံးလို့မဖြစ်လို့ အမြန်ညွန်ကြားပေးစေချင်ပါတယ်။
mini-KMS_Activator_v1.1_Office.2010.VL.ENG.rar (2 MB) ကို ပို့စ်နံပါတ် ၄၀ မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အဲတာကို Download ချပြီး ပို့စ်နံပါတ် ၄၁ - ၄၂ မှာ install လုပ်ဆောင်နည်း ဖော်ပြထားပါတယ် ကို Arker Min Myat
ငြိမ်းချမ်း, နိုးတူး, minthumon
TuneUp Utilities 2010 9.0.4400.16 Software + Serial Keys
ကို KznT, အကို တင်ပေးထားတာက trial version ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်... ကျွန်တော် serial key ထည့်ပြီးသုံးတာ တပတ်လောက်ကြာတော့ key ထပ်တောင်းနေလို့..ရှိရင်ကူညီပေးပါအုံးဗျာ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
20-08-2010, 01:13 AM
ကျွန်တော် မူလနေရာမှာ TuneUp Utilities 2010 v9.0.4500.29 Software + Serial Keys ခု နောက်ဆုံး ဗားရှင်း ပြောင်းတင်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်မပြေရင် ထပ်ပြောပါ - အရင် ကောင်ထက် ခု version က ပိုမြင့်ပါတယ်။ Password က မူလအတိုင်းပါပဲ - အဆင်ပြေပါစေ ကိုနိုးတူး -
ကိုဦး, ပုထုဇဉ်, ဝင်းအောင်, နိုးတူး, kyaukphyu, minthumon
ကို KznT, prefetch data deleted ဆိုပြီး Fix Problems အောက်မှာ 1 problem had been detected ဆိုပြီး ပေါ်နေတယ်အကို.. အဲတာ အဲဒီ problem ကို ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါအကို... အခု အကိုပေးထားတဲ့ software ကိုပဲသုံးနေတာအကို..ကျေးဇူးပါပဲဗျာ...
ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ အသေးစိတ် ဖြေရှင်းပေးထားပြီးပါပြီ။ နောက် မေးခွန်းများကို တစ်နေရာတည်းမှာပဲ မေးပေးဖို့နဲ့ နှစ်နေရာခွဲပြီး မမေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ လိုပါတယ်။
နိုးတူး, arkaraung, minthumon
21-08-2010, 12:07 AM
ကို KznT.... key maker က ဘယ်လိုသုံးရလဲ ဆိုတာ နဲနဲ ရှင်းပြပေးပါဗျာ...Installed ID တောင်းလို့ .. activation လုပ်ရင် .. ဘယ်က ID ယူရမှာလဲအကို.. ကူညီပေးပါအုံးဗျာ....
Last edited by KznT; 21-08-2010 at 12:21 AM..
21-08-2010, 12:45 AM
သူ ဖော်ပြထားတဲ့ INSTALLATION METHOD!! အတိုင်း တစ်လုံး မလွဲ ကူးယူ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
*press "activate manually usingaweb browser" button in opened activation window
*open keygen and write installation id to keygen and generate
*write activation code and activate
Last edited by KznT; 21-08-2010 at 04:08 AM..
ဝင်းအောင်, နိုးတူး, minthumon
Nero Multimedia Suite ကတော့ တစ်ခုတည်းနဲ့ အစုံပါတဲ့ Suite လို့ ပြောရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ Burning ROM လည်း ပါတယ်။ တစ်ခြား ဖျော်ဖြေရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ Applications အားလုံးလည်း အသင့်ထည့်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ Nero ဆို Buring ROM အဖြစ်လောက်ပဲ အသုံးပြုကြတဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ ဒီ Nero Multimedia Suite ကြီး တစ်ခုလုံးက အရမ်းကြီးလွန်းတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ Applications တွေကို install လုပ်တဲ့ အချိန်မှာမိမိလိုအပ်တာကိုပဲ ရွေးတင်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဘူး Nero အစား တစ်ခြား Burner တစ်ခုခု ကို သုံးကြဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 640x273.
ကို KznT ခင်ဗျာ....nero activate ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ ဆိုတာ လေး ရှင်းပြပေးပါအုံး... အခုကျွန်တော် သူ့ထဲမှာပါတဲ့ seiral key ကိုထည့်တာ နောက်လထိပဲခံနေလို့ ပြီးတော့ demo version ဖြစ်နေတယ်အကို.. pro version မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်..(ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် က ပိန်းတာလဲ ပါမှာပေါ့ အကို) အကူအညီတောင်းရတာတောင် အားနာနေပီ...ဒါပေမဲ့ ကူညီပေးပါအုံးဗျာ ...
24-08-2010, 08:47 AM
သူကတော့ Hard Disk Manager တွေထဲမှာ ကျွန်တော် သဘောအကျဆုံး တံဆိပ်ပါပဲ။ အသုံးပြုရလည်း လွယ်သလို အန္တရာယ်လည်း ကင်းပြီး စိတ်လည်း စိတ်ချရပါတယ်။ Paragon Hard Disk Manager ကနေ အခွေရိုက်ထုတ်ထားတဲ့ BootCD ဆိုတာ ဘယ်အချိန်သုံးသုံး တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေတဲ့ BootCD တစ်ခုပါ။ ကိုယ်တိုင်း စက်ကို ပြင်ဆင်ချင်သူတွေ Hard Disk ကို ကိုယ်တိုင် ပုံစံတကျ Format ပြန်ချချင်သူတွေ အတွက် မရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software ကောင်းတစ်ခု ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။
ကို KznT...တခု မပြီးသေးဘူး နောက်တစ်ခု မေးတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ ...အကို ရေးထားလို့ ကျွန်တော် ubuntu သုံးမလို့ hard disk ကို partition ခွဲမလို့...အခု program install လုပ်တာ...
အဲဒီစာသားတက်လာတယ်...ဒါကြောင့် Paragon 64 bit version ရှိရင် တင်ပေးပါလားဗျာ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
တလက်စတည်း အပေါ်က Nero ပြဿနာလေးကို ရှင်းပြပေးပါ...
ကျွန်တော်လည်း စာမူတွေဘက် လှည့်နေလို့ဗျာ - အားလည်းနာပါတယ် - ဒီနေ့တော့ စာမူကိစ္စ အကြမ်းထည်ပြီးတာလို့ ခုမှပဲ ပြန်လှည့်နိုင်တော့တယ်။ ကိုနိုးတူးမေးထားတဲ့ Serial key ဆိုတာ ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တဲ့ ဖိုင်ထဲမှာ ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြထားသလို note pad နဲ့ပါပါလိမ့်မယ်။ အဲတာကို ထည့်ပေးရမှာပါ -
တကယ်လို့ ထည့်ပေးကြည့်တယ် - ဘယ်လို မှ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ခဏစောင့်ပါ - လောလောဆယ် သူကနောက်ထွက် version နောက်အသစ်တစ်ခု ထပ်တင်ပေးဖို့ လုပ်နေပါတယ်။
Paragon 64 bit version ရှိပါတယ် - လောလောဆယ် Upload နေပါတယ်။ သူ့ကိုလည်း ခဏလေး စောင့်ပါ - မဖြေပေးဘူး ဖြစ်မှာစိုးလို့ အရင်ဖြေပေးလိုက်တာပါ - အားလုံးတင်ပြီးသွားရင် သက်ဆိုင်ရာ နေရာ အသီးသီးမှာပဲ ထပ်ပေါင်းဖြည့်ပြီး ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။ နောက်နေ့ မတိုင်ခင်တော့ ရလောက်မှာပါ။
( Update !! အားလုံး သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်အသီးသီးအောက်တွင် ဖြည့်သွင်းဖော်ပြပြီးပါပြီ )
Last edited by KznT; 24-08-2010 at 11:34 PM..
ချစ်သားငယ်လေး, ဇော်ရဲပိုင်, နိုးတူး, hellboy, minthumon, tu tu
အစ်ကို ညီလေးတော့ အဆင်မပြေဘူးအစ်ကို..။ ဒီလိုလုပ်လည်း အောက်ကလိုဖြစ်နေတာ ..။
ဖြစ်နေတာက word ကို run လိုက်၇င်အောက်ကလို ဘောက်ပေါ်လာတာပါ..။
ကျနော် အဆင်ပြေသွားတဲ့ နည်းလေးနဲ့ ဝင်ပြီး ဆွေးနွေးကြည့်မယ်ဗျ ....
ကျနော်လည်း အဲ့ဒါ activate ဖြစ်ဖို့ နည်းမျိုးစုံ လုပ်ကြည့်နေတာ .....
အရင်ဆုံး အောက်က Office 2010 Activation and Conversion Kit 1.6
လေး ကို အရင်ဒေါင်းလိုက်ပါ ....
ပြီးတော့ D-click ပေးလိုက်ရင် အရင်ဆုံး
Activate office 2010 and install KMS activator
ကိုနှိပ်ပြီး အရင်တုံးက ဟာ ကို remove လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ် ..... ပြီး ရင် အဲ့ဒီက product key ကိုမှတ်ထားပြီးတော့
Insert Remove or Check Office product keys ကိုဝင်ပြီး Remove an office product keys ကိုနှိပ်လိုက်ရင် အရင်ဆုံး
product keys အရင်ကထည့်တဲ့ ဟာကို remove လုပ်ဖို့ Product keys ကို ထည့်ပါ့မယ်...၅
ပြီးရင် ပြန်ထွက်ပြီး အပေါ်က Activate office 2010 and install KMS activator ကို ကလစ်ပေးပြီး သူပြောတာ လိုက်လုပ်ပေးလိုက်ရင် ရပါပီ ....
နောက်ပြီး microsoft file တခုခု ကိုဖွင့်လိုက်ရင် သူက install ပြန်လုပ်မလားမေးရင် install ကို နှိပ်ပြီး configure ခဏလုပ်တာ စောင့်ပြီးရင် အဆင်ပြေစွာနဲ့ activate ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ......
ကျနော်ပြောတာ ရှုပ်နေတာနဲ့ နားမလည်မှာစိုးလို့ ပုံလေးတွေနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ် ....
ကျနော်ပြောတာ အဆင့်တွေ မှားယွင်းရင် မှားယွင်းနိုင်ပါတယ်
ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဆိုတော့ ကိုဝင်းအောင်မေးတာ တွေ့ တာနဲ့ ကျနော် မနေ့ ကလုပ်ထားတဲ့ activate ဖြစ်ပြီးသားကို ပြန်ပြီး စမ်းပြီး ဖြေရှင်းကြည့်တာပါ ...
Activate လုပ်တုံးက အဆင့်တွေကို အတိအကျကြီး မမှတ်မိတော့လို့ ပါ ...
ဒါပေမယ့် ဒီ activator လေးနဲ့ အဆင်ပြေသွားပါတယ် ...
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမှားအယွင်းရှိရင် ပြောကြပါအုံး ...
ကိုဝင်းအောင် ရော အဲ့ဒီ activate မဖြစ်တာ သူငယ်ချင်းတွေ တော်တော်များများမှာလည်း တွေ့ နေတာနဲ့ ဆွေးနွေးကြည့်တာပါ ... အဆင်မပြေရင်လည်း ပြန်ပြောပါအုံး ဗျာ ......
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ yawnathan အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သားငယ်လေး, မျိုးမင်းငယ်အောင်, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းသူအောင်, ဇော်ရဲပိုင်, နိုးတူး, hellboy, KznT, minthumon, tu tu, zo
Originally Posted by yawnathan
... အဆင်မပြေရင်လည်း ပြန်ပြောပါအုံး ဗျာ ......
အဆင်မပြေဘူးသယ်၇င်းေ၇ ..။ အောက်ကနေ၇ာမှာတန့် နေတယ် ဘယ်လိုလဲသိဘူး
ဒီ ဝိုင်းထားသော Tag အောက်က ReArm Office 2010 Product ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်၇င်လည်း အလိုလို activate ပြန်ဖြစ်ပါတယ်...။ အခုလိုကူညီတဲ့ိကို ယောနသံ ကိုအထူးဘဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ..။ မိသားစုဝင်များလည်းactivate ပြဿနာကိုအောင်မြင်စွာဖြေ၇ှင်းနိုင်ကြပါစေ
သန့်ဇင်ဌေး, Arker Min Myat, hellboy, KznT, minthumon, zo
စာစီစာရိုက်တစ်ခုတည်း အတွက် မဟုတ်ပဲ ဘက်စုံသုံး ရုံးသုံး ကျောင်းသုံး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းသုံး - နယ်ပယ်စုံမှာ အသုံးချဖို့ သင့်တော်တဲ့ နောက်ထပ် မရှိမဖြစ် မသုံးမဖြစ် အသုံးပြုရမယ့် Applications ကောင်း တစ်ခုကတော့ Microsoft Office 2010 ပါ။ Microsoft Office 2010 နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အရင် Versions တွေနဲ့ စာရင် ဘာတွေ ကောင်းလာသလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ ဆွေးနွေးထားခဲ့ဖူးတာ ရှိပါတယ်။ ဒါတင်မက Microsoft Office 2010 ကိုပဲ ဒီနေရာမှာ တစ်ခါ တင်ထားပေးပြီးသား ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ Microsoft Office 2010 က 32bit တစ်ခုတည်း အတွက်ပါ။ ဒီ Microsoft Office 2010 ကတော့ 32bit ရော 64bit ရော အတွက်ပါ။ နောက်ပြီး ဒီ Microsoft Office 2010 Professional Plus x64 and x86 14.0.4743.1000 က အရင် ကျွန်တော် တင်ပေးဖူးတဲ့ Microsoft Office 2010 လို မဟုတ်ပါဘူး - ဒီ Microsoft Office 2010 ဟာ Full Activated လုပ်ဆောင်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
ကို KznT... ကျွန်တော် ဒေါင်းတော့ အောက်က error မျိုးပေါ်လာတယ်အကို
! C:\_Users\_notwo\_Documents\_Downloads\_Compressed\_2010 2011 MF Collection - MO FULL.part01.rar: Cannot create 2010 2011 MF Collection - MO FULL\_Microsoft Office 2010 Professional Plus x64 and x86 14.0.4743.1000 Full Activated\_MICROSOFT.OFFICE.2010.RTM.14.0.4734.1000_ProfessionalPlus_volume_x64_en-us.rar
! C:\_Users\_notwo\_Documents\_Downloads\_Compressed\_2010 2011 MF Collection - MO FULL.part08.rar: Cannot create 2010 2011 MF Collection - MO FULL\_Microsoft Office 2010 Professional Plus x64 and x86 14.0.4743.1000 Full Activated\_MICROSOFT.OFFICE.2010.RTM.14.0.4734.1000_ProfessionalPlus_volume_x86_en-us.rar
ကျွန်တော် အကိုပြောသလို www.myanmarfamily.org ကို keyboard US ပြောင်းပြီး သေသေချာချာ ရိုက်ထည့်တာပါအကို...ဘာလွဲသွားလဲ မသိဘူး...ကူညီပေးပါအုံး
File အားလုံးကို လက်ရှိရောက်နေတဲ့ C:\_Users\_notwo\_Documents\_Downloads\_Compressed\_ အောက်ကနေပြီး C:\_ အောက်ကို ရွှေ့ပါ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြား Partition တစ်ခုခု ဥပမာ - F:\_ ဒါမှမဟုတ် D:\_ စသဖြင့် အောက်ကို အရင်ရွှေ့လိုက်ပါ။ လောလောဆယ် ဖြစ်နေတဲ့ Error က file name length မှာ Characters အလုံးပေါင်း ၂၆၀ ထက် ကျော်နေလို့ ပါ။ Directory ပြောင်းပြီး ပြန်လုပ်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
Last edited by KznT; 31-08-2010 at 12:03 AM..
သန့်ဇင်ဌေး, နိုးတူး, bonge, minthumon, yawnathan